Sandals uye Beaches Resorts: Inishuwarenzi Yekufamba Iri Patiri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Sandals uye Beaches Resorts: Inishuwarenzi Yekufamba Iri Patiri
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuvhuna Grenada Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Kuvhuna Saint Lucia Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sandals Beaches uye Resorts
Kuvimba uye kuvimba zviri kuwedzera kuve zvinokosheswa zvevatengi pavanotanga kufamba zvakachengeteka kunzvimbo dzavanorota zvakare. Ichi ndicho chikonzero Sandals® Resorts uye Beaches® Resorts vari kupa vaenzi zuva, jecha, zororo uye kunyanyisa kuvimba kana uchibhuka nekuda kwemaviri matsva akawedzerwa marongero eBhuku NeRuvimbo chirongwa. Iyo Luxury Inosanganisirwa® resort kambani iri kupa nyowani Kufamba Kudzivirirwa Chirongwa - Inishuwarenzi Iri Patiri, inofambiswa neTrip Mate, iyo ichatengwa panzvimbo yevaenzi otomatiki uye chikamu chekushanya kwavo kwekufambisa kubva muna Gumiguru 6, 2020. Izvi hazvingoshanda chete kune zvitsva zvekuchengetedza, asi ichi chinhu chakavakirwa kubatsira kuisa pfungwa dzevatengi kurerukirwa inoshandawo kune ese akange aripo Sandals neBeach bookings akaitwa pamberi paGumiguru 6, 2020 uye achifamba kusvika Chivabvu 31, 2021. Pamusoro pezvo, vafambi vanogona kukanzura nzvimbo yavo yekutandarira chero nguva uye vanoronga zororo ravo remangwana nechivimbo nekuda kwechitsva Kuchenesa Kudzivirirwa Kubatsirwa * neZvakasiyana Zororo.
"Vafambi vanoita zvirongwa zvezororo kuCaribbean yakanaka vanogona kunzwa vane chivimbo kupfuura nakare kose nezverwendo rwavo rwekuenda kuparadhiso nekuda kweaya maviri matsva akawedzerwa purogiramu yedu yeBhuku NeRuvimbo," akadaro Adam Stewart, Mutevedzeri Wachigaro weSandals Resorts International.
"Tinoziva vakaroorana uye mhuri pamwe chete vari kushuva rwendo runodiwa kwazvo rweLuxury Included®, uye tinofara kuvapa mabhenefiti aya kuitira kuti vagone kunyorera zororo ravo neimwe nzira yekusimbiswa."
Sezvo nyika dzezvitsuwa dzakatanga kuvhura miganho, maSandals Resorts akave ekutanga mahotera kuvhura madhoo ayo kuyambuka maCaribbean. Mitemo yakasimba yakagadziriswa neSandals neBeach Resorts yakabvumidza gumi nembiri yayo 12 resorts kuvhura, ichiratidza kuti maSandals nemaBeach Resorts anoenda pamusoro nekupfuura kuona kuti vatengi vanogona kunakidzwa nezororo ravo nechivimbo, kubva pakusvika kusvika pakuenda. Nebhuku rayo rakafungidzirwa neBhuku reChivimbo munzvimbo, vafambi vanogona kubhuka zororo ravo uye kutarisisa pane izvo zvinonyanya kukosha - nguva yakanaka nevadikanwi kunzvimbo dzakanakisa dzekugara muCaribbean.
Yekufamba Yekudzivirira Chirongwa - Inishuwarenzi Iri Patiri!
Kupa vaenzi kunyangwe kudzivirirwa, maSandals nemaBeach Resorts akawedzera chirongwa chekufamba kwekudzivirira - Inishuwarenzi Iri Patiri inofambiswa neTrip Mate iyo ichatengwa panzvimbo yevaenzi. Zano racho rinopa vakaroora vakanyoreswa izvozvi kusvika Zvita 31, 2020, vakawedzera mabhenefiti ekurapa panguva yekugara kwavo kwekugara.
Zvinotarisirwa neChirongwa Chekudzivirira Kwekufamba - Inishuwarenzi Iri Patiri inovhara:
Mari dzekurapa dzakaitika sechikamu chekurapa chirwere, mamiriro uye / kana tsaona. COVID-19 inorapwa zvakafanana nechero humwe hurwere.
Mari yekufambisa kuenda kunzvimbo iri padyo inokwanisa kupa kurapwa kwechirwere kana kukuvara kwakanyanya, kwakanyanya kana kutyisidzira hupenyu. Mari yekufambisa yekudzokera kumba yakafukidzwa zvichitevera kuchimbidzika kwekurapwa kwekurapa (kana kukuvara kwakavharwa kana kurwara). Kunonyanyisa Kubatsirwa kwe $ 100,000 Pamunhu
Iko hakuna kusarudzika kweakagara-aripo mamiriro.
Kana zvirongwa zvekufamba kwemuenzi zvanonoka nekuda kwekuti muenzi aiswe oga, chirongwa chekudzivirira kwekufamba - Inishuwarenzi Iri Patiri inodzorera mari yekuwedzera pekugara, chikafu uye zvekufambisa zvemuno. Kunonyanyisa Kubatsira $ 200 Pazuva, Pamunhu uye kusvika kumadhora 2,800
Iko hakuna kushomeka kana kunonyanyisa zera muganho wekukodzera.
Mabhuku ese akaitwa pamberi paGumiguru 6, 2020 aine yakatengwa yekuwedzera yeRwendo Mate Rwendo Dziviriro Chirongwa - Inishuwarenzi Iri Patiri Chirongwa ichagamuchira Supplemental Yekufamba Yekuchengetedza Dziviriro inovhara:
Yakawedzerwa inishuwarenzi kufukidza yeEmergency Medical Kubuda. Yakawedzera $ 50,000 pamunhu
Njodzi & Kurwara Mari Yekurapa. Yakawedzera $ 75,000 pamunhu
Kana marongero ekushanya kwemuenzi achinonoka nekuda kwekuti muenzi aiswe oga, iyo Supplemental Travel Dziviriro Chirongwa - Inishuwarenzi Iri Patiri inosvika inosvika kune inowedzera $ 2,050 pamunhu Maximum.
Kuchenesa Kudzivirirwa Kubatsirwa *
Kubva izvozvi kusvika Zvita 31, 2020, vashanyi vanogadzirira Luxury Inosanganisira® Zororo vanozove neyakawedzera yekuziva kuti vanogona kukanzura zororo ravo mazuva makumi matatu nemasere vasati vasvika uye vanogashira mari izere pamunda chikamu chezororo ravo nemitero zero. Vashanyi vachidzima mazuva makumi matatu nemashanu vasati vasvika vanogashira mubatanidzwa wemakumi mashanu muzana ekudzoserwa uye 31 muzana chitupa chekufamba cherwendo rwemberi kune chero Sandals kana Beaches Resort mukati memwedzi gumi nemaviri. Vafambi vane zvakare yakawedzera perk yekukanzura mukati memazuva gumi nemana uye kusvika pazuva rekuuya kwechitupa chekufamba chinoshanda kwemwedzi gumi nemaviri kubva pazuva rekutanga rekufamba.
* Iyi bhenefiti inopihwa neakasarudzika Zororo uye haisi iyo inishuwarenzi kubatsirwa. Iyi bhenefiti yakaparadzaniswa nechero Yekufamba Dziviriro Chirongwa.
Sandals uye Beaches Resorts vari kuita zvese zvinogoneka kuti vape yakachengeteka, isina musono uye isina kushushikana-ruzivo kuitira kuti vashanyi varambe vachibhuka yavo Luxury Inosanganisira® Zororo vane chivimbo chakazara. Iyi Kubviswa Kudzivirirwa Kubatsirwa, pamwe neRwendo rweKudzivirira Rwendo - Inishuwarenzi Iri Patiri uye iyo Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana uye Mahombekombe ePlatinamu Maprotocol eUtsanana, inobvumira vafambi kutizira kuCaribbean nerutendo rwavave kutarisira.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve maBhuku neRuvimbo, shanya: